हस्पिटालिटी शिक्षामा एक दशकको यात्रा | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा हस्पिटालिटी शिक्षामा एक दशकको यात्रा
हस्पिटालिटी शिक्षामा एक दशकको यात्रा
रविभवनस्थित काठमाडौं एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटीको स्थापना सन् २००२ मा भएको हो । यसले स्थापनाकालदेखि नै व्यवस्थापन सङ्कायअन्तगर्तको ब्याचलर अफ ट्राभल एण्ड टुरिजम स्टडिज (बीटीटीएस) र माष्टर अफ टुरिजम स्टडिज (एमटीएस) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो त्रिविको बीटीटीएम र एमटीटीएमजस्तै कार्यक्रम हो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको दक्ष जनशक्ति अभाव हटाउन कलेजले यी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । ‘बीटीटीएस र एमटीएस कोर्स म आफैले बनाएको हुँ,’ कलेजका प्रिन्सिपल सुधीर अधिकारीले भने, ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले उक्त कोर्स अध्यापन गर्न स्वीकृति दिएपछि पढाइ सञ्चालन गरेका हौं ।’
त्रिविको बीटीटीएम र एमटीटीएम कोर्स नाथममा कार्यरत रहँदाताका अधिकारी आफैले बनाएको बताउँछन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गत प्लस टू तहमा पढाइ हुने टुरिजम म्यानेजमेण्टको कोर्स पनि आफैले बनाएको उनको दाबी छ । पर्यटनसम्बन्धी उच्चशिक्षा दिने शैक्षिक संस्था नेपाल कलेज अफ ट्राभल एण्ड टुरिजम म्यानेजमेण्ट (एनसीटीटीएम)को तत्कालीन फाउण्डर प्रिन्सिपल पनि आफू नै रहेको उनले बताए ।
चालू शैक्षिक सत्रबाट बीटीटीएस कोर्स ४ वर्षे हुन लागेको छ । कलेजले ४ वर्षे (८ सेमेष्टर) बीटीटीएस कोर्सको अध्ययन पूरा गर्न रू. २ लाख ६५ हजार शुल्क लाग्ने बताएको छ । यसअघि ३ वर्षे (६ सेमेष्टर) हुँदा यो कोर्स पूरा गर्न कलेजले रू. १ लाख ८२ हजार शुल्क लिँदै आएको थियो । कलेजमा हाल २ सय ३० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कलेजले प्रत्येक वर्ष बीटीटीएसका लागि १ सय २० जना विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरेको छ । हालसम्म कलेजले बीटीटीएस र एमटीएस गरी ८ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेको छ । यीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले राम्रो ठाउँमा रोजगारी पाएको कलेजको भनाइ छ । अधिकांश विद्यार्थी अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा रोजगारी गरिरहेका छन् । कलेजले ‘सम्पन्नता र शान्तिका लागि पर्यटन’ भन्ने लक्ष्यलाई आत्मसात् गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रिन्सिपल अधिकारीले बताए ।